Ndidala njani i-backlinks kwiwebhusayithi ngaphandle kokuhlawulwa?
Ukuba ufuna ukudala i-backlinks kwiwebhusayithi endaweni yokukhawuleza ukufumana abanye abahlawulwayo-mhlawumbi sele sele uthathe isinqumo esifanelekileyo. Masijamelane nayo - ukufaka isicelo sokuthengiswa kwekhonkco ngamanye amaxesha kubonakala ngathi ngumzamo othembisayo. Enyanisweni, nangona kunjalo, ukuba kukho amathuba amaninzi kakhulu okwenza ingozi ngakumbi kwinkqubela yakho yangoku, kunokuba uzuze kunoma yimuphi umlinganiselo onokulinganisela kunye ohlala njalo kwizithuthi, ii-CTR, ukuguqulwa, njl.Into kukuba ngoku iGoogle igxininisa ukunikezela ngeendlela zokwakha izakhi kunye nezendalo. Kuthetha ukuba ukudala i-backlinks kwiwebhusayithi ngendlela efanelekileyo uza kufuneka utyalomle ixesha kunye nomzamo ukukhangela kuphela iphepha lewebhu lesithathu elichaphazelekayo kunye neeblogi. Eyona nto, iinjongo zanamhlanje zomgangatho kunye nokuqulunqwa kweekhonkco zezinto ezinxulumene nezixhobo zendalo akuzona nje ezilula kwaye zilula njengoko zisetyenziswe, umzekelo, emibini okanye emithathu edlulileyo. Ezi zihlandlo ezindala zadlulile.
Namhlanje, unokuphumelela ukudala i-backlinks kwiwebhsayithi kuphela xa usebenzisa izicwangciso zokusebenza ezifanelekileyo, ngokuhambelana nokugcina isicwangciso seSET jikelele zihlaziywa rhoqo kwaye zilungiswe emva kwazo. Kodwa asikho isidingo sokukhathazeka-apha kuza iindlela ezimbalwa zokusetyenziswa-zokufumana izixhumanisi eziphezulu. Yonke into oyifunayo apha kukutyhala ixesha kunye nemizamo - kunikezelwa ukuba awukho omnye walezo zinto ezingenabani-kunye nezandla - kunye neprofayili yakho yoqhagamshelwano yakhiwe ngokufanelekileyo. Ngoxa amanye amanyathelo alandelayo angenakuthatha ngaphezu kwemizuzu emibini ukuba ube nakho konke okukhoyo, amandla abo amakhulu ekuphuculeni i-SEO yakho akufanele iphandwe. Ngoko, ngezantsi ezinye zeendlela zam ezibonakalayo eziphezulu zokudala i-backlinks kwiwebhsayithi - ngokwemvelo, ngokufanelekileyo nangaphandle ngaphandle kokuhlawula ipenki.
Fumana isiqulatho soMgangatho okhupha ixabiso
Kubonakala ukuba, ukutsala iindwendwe ezininzi ezihambayo zihamba ngolwazi olukhethekileyo, olusemgangathweni nolunamahala ngexabiso langempela mhlawumbi indlela efanelekileyo yokudala i-backlinks kwiwebhusayithi ngokusemthethweni, kwaye ngaphandle umngcipheko wokufumana isohlwayo esicaleni. Konke okufunekayo kukubonelela ngokukhawuleza kwiphepha lephepha (amanqaku aqinile, uphando lwamaxesha, njl. ) ukwenzela ukuba abantu abaninzi babelane ngako, badibanise kuyo, kwaye bakubhekisele kwenye indawo kwiWebhu. Ngaloo ndlela, cinga ukuphinda uhlalutye inxalenye yemibhalo yakho yombhalo ocacileyo ibe yinto enokuqonda kunye neyamehlo, njenge-infographics encedisayo, iipredishithi, iifowuni ezifutshane, iitshathi, njl.
Yenza Uninzi lwabaMncintiswana
Ewe, akukho nto ephosakeleyo ngokuhlola iincutshe zakho kwixesha lakho ukuze ufunde ngokubanzi malunga namava abo abaphumeleleyo kwikhonkco isakhiwo ukuze uhlalutye kakuhle imizamo yakho eyongezelelekileyo. Unganqikazi ukuzama ukusebenzisa enye yezixhobo ezidumiweyo kwi-intanethi yocwaningo lwe-backlink kunye nohlalutyo olukhoyo ekufikeleleni okuvulelekileyo. Ngokwam, ndifumene izikhokelo ezilandelayo kuncedo ukufumana ingqiqo ebalulekileyo yokuncintisana - iMoz's Open Site Explorer (Moz), Semalt Analyzer (Semalt), Screaming Frog SEO Spider. Yonke inokusebenza kakuhle apho. Cinga nje ngeendlela eziye zihloliswe kwi-PageRank ephezulu kunye nemithombo yamandla ukudala i-backlinks kwiwebhusayithi okanye iblogi yakho.
Ukuba nomxholo oqinileyo wokuvelisa i-backlinks esemgangathweni kunye nokusebenzisa abadlali bakho be-niche ukuba baphinde baphinde bazuze i-winners best for yourself. Ngaloo ndlela, qiniseka uqhubeke usebenza kanzima kungekhona nje ukuzakhela i-backlink ngokwabo, kodwa ngenxa yamandla akho anamandla kunye nolwazi oluntu ngokubanzi. Cinga ngodliwano-ndlebe nabachaphazelekayo abaphezulu kwi-shishini lakho, ukutsala abaphulaphuli abanzi kwiiNtlalontle zoLuntu, ukukhulisa izinto zakho eziphambili ngokubhengezwa kwezithuba zeblog blog kunye namanqaku, kunye nokubonelela izimvo ezinokuqonda kunye nokuqonda ukuze ujabulele ezo zihlandlo ezifanelekile Source .